Home » Creative Writing » ဦးအောင်သိန်းနဲ့ ကြာဆံချက်…
သွတ်ပြားရဲ့ အချက်အပြုတ်ဆြာက အဲသည့် ဦးအောင်သိန်း…
ငယ်ငယ်တုန်းက သူ ချက်ပြီဆို ဘေးကနေဟင်းမြည်းရင်း ထိုင်ကြည့်လာတာ…
၀ါးခယ်မ ဆီထမင်းနဲ့ ငါးကြော်… ပြီးတော့ ဘယ်မြို့နားနီးလဲမသိ ခြင်တွေတပုံကြီးဝင်လာလို့ ခြင်ထောင်ချထားရတယ်
-ကြာဆံချက်ထက်…ရဲစခန်းမှာ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ကိတ်စ ခေါင်းထဲပိုရောက်သွားတယ်
-အာ့မျိူးးဒေ ကြားရရင် စိတ်မချမ်းသာဘူးညော်
ရဲဆိုတဲ့အမျိုးက မနှိပ်စက်ရရင် စားမဝင်ဘူးလားမသိ…
ငယ်တုန်းက ရထားစီးရင်း ဘေးနားလာအော်သမျှ ဈေးသည်အစုံဝယ်စားရတာ အရမ်းကြိုက်တာ..။ အကြော်တို့ ဆီထမင်းတို့….ရထားစီးချင်တာထက် အဲ့ဒီအသည်တွေဆီက စုံစီနဖာလိုက်စားရတာကို ပိုကြိုက်တာ..
အဲ့သည်တုန်းက ရန်ကုန်-လားရှိုးရထား အစုန်အဆန်ကူးခဲ့တာရယ်…. ။ ဂုတ်ထိပ်တံတားပေါ်ရောက်ရင် အိပ်ပျော်နေလဲ အမေကနှိုးတယ်…။
ကြာဇံချက်ကတော့ အရမ်းကြိုက်ပဲ…။ အမယ်များလေ စားကောင်းလေ…..
အပေါ်ဝေ့နေတဲ့ ဆီတွေကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ဖယ်ဖယ်စားတယ်
ခုတောင်.. လွမ်းလာပြီ…. ဒီချိန်ဘယ်နားရှာရပါ့..
ခရီးသွားရင် အဲသည့်လို စုံစီနဖာစားရတာ ဦးလေးလည်းကြိုက်တယ်…
ဘဲမံမီနဲ့မိသွားတာတော့ မေ့မရ … ခြောက်ပြီး မာတောင်နေပြီ…
အာဝဇ္ဇန်းရွှင်တဲ့ အူးအောင်သိန်းရယ်… ‘နေညိုလေပြို’ ကြာဆံချက်ဖြစ်ဖြစ် ‘ဟင်္သတအောင်သိန်း’ ကြာဆံချက်ဖြစ်ဖြစ် နာမည်လေးတပ်ပြီး ရွှီးလိုက်ပြီးရော
ဟီ ဟိ သူ့မှာရွှီးနိုင်ဖို့ နေနေသာသာ ရင်တုန်နေတာတဲ့…
အသံထွက် ရယ်မိမှာစိုးလို့ မနဲအောင့်ထားရသတဲ့… လူတွေ လူတွေ ခွိ
ငယ်ငယ်တုန်းက ဧရာဝတီသင်္ဘောစီးရင် သင်္ဘောပေါ်က ထမင်းဆိုင်မှာစားရတာကို သိပ်သဘောကျခဲ့တာ။
ရန်ကုန် – ပုသိမ်သင်္ဘောဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်…
အာ ဟိ … နာမည်ကို တစ်လုံးလွှဲထားတာ အန်တီမာမား…
သဘောက.. စိတ်မပါ့တပါမို့.. တလွဲကြာဆံချက်ပေါ့..
ဒါမှမဟုတ်.. အမူးသမားသိုင်းလို… မူးလေကောင်းလေ..လား..။
တလွဲကြာဆံချက်ကို လူကြီးကတော်က ကောင်းတယ်ဆိုတော့…
ဘေးက “အနားပြာ”တွေ မကောင်းလည်း လိုက်ကောင်းကြတာလေ… ခွိ
သူ့ဟာသူတောင် ချက်ရတာစိတ်မပါလို့ မကောင်းဘူး ဝန်ခံထားတာ…
ခံတွင်းပျက်နေတဲ့ ကတော်ချုပ်နဲ့တွေ့တော့ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးသွားတာပေါ့…
.ကျုပ်လည်း ဧရာဝတီသေဘောင်္မျိုးစုံနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းနှံ့ခဲ့ပါသဗျ
အရင်ကတော့ ဟုတ်တယ်ဆြာမိုက်ရဲ့… အခုတော့သွားပြီ…
ဧရာဝတီသဘောင်္တွေက အခုဆို ငါးနဲ့ ကုန်တွေပဲသယ်တော့တယ်…
အဲသည့်နေ့က နိုင်ပါ့ဗျား … ဦးအောင်သိန်းရှုံးတာ မတွေ့ဖူးသလောက်ပဲ…
၁၂-မျိုးဟင်းချို အကြော်အလှော်တွေနဲ့ ကျောက်စ်တို့လည်း အူစိုတာပေါ့…
တော်စပ်မှုကိုရေးတာ….ခုထိစပ်မတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်… ခွေးတွေကိုလည်း… အရက်တိုက်တာလား…
အဲ့ဘွားတော်ကလည်း… တသက်လုံး…အစားကောင်းမစားဖူးတာနေမယ်…. သများဆို… သူများ food review ရေးတာတွေ..ကွန်မင့်တွေဖတ်
ဖအေတူ မအေကွဲပါဆို… ဝီးပါ့ကွီ… ဟီ ဟိ
ကျောက်စ် သန်းမဂျီးဖြစ်ရင် ညည်းကို အစားအသောက်ရေးရာဝံဂျီးခန့်မယ်… ခွိ
ခွစ်လေးရဲ့ စစ်တပ်ကို ရီးပဲ လို့ အစဲသော့ဗါပူး… ဂလုထဲ ပျံလာဘ်ခံပေးပါ။
ဟိုးတုန်းက ဗန်းမော် – မန်း သင်္ဘောကြီးတွေက
အဆန် ၃ ညအိပ် ၄ ရက် ၊ အစုန် ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ဆိုတော့ ပျင်းနေအောင်စီးရတာဗျ ၊
သင်္ဘောပေါ်မှာက စာအုပ်ဆိုင် ထမင်းဆိုင် အဲ အဲ ဖဲဝိုင်းက ၃ – ၄ ဝိုင်း ၊
ဟီး ဟီး လွမ်းလိုက်တာ ၊
အခုတော့ ကားက ၁၂ နာရီပဲကြာတော့ ကားစီးကြ ၊
ရေလမ်းဆိုလည်း ရှပ်ပြေးပဲ စီးကြတော့
အညာဆန်ကြီးတွေခမျာ ကုန်သင်္ဘောဘဝ ရောက်ရရှာလေသတည်း ပေါ့ ၊
မိုးတားမုန့်တီမစားရတာ ဆယ်နှစ်မကတော့ပါဘူးဗျာ ၊
တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖဲကြိတ်ဝိုင်းလည်းရှိ… ဟီ ဟိ
အူးမျိုးတမီးကို ခြစ်သယ်ဂျာ… ဒါနဲ့ ဗါပုလျို့ အနော့်ကို ဘော့သွားဒါလျဲ….
ကျောက်စ် လက်ရာ ဖတ်ရင်း ဧရာဝတီမြစ်ထဲ နှစ်ထပ်သဘောင်္ကြီး နဲ့ တစ်ခါက ခရီး သွားတာ တွေ လွမ်းမိပါ့။
မဖတ်ရတာကြာလို့လား မသိ အရသာရှိတာမှ ဦးအောင်သိန်း ရဲ့ ကြာဆံချက် အတိုင်းပါဘဲ။
ဟရောင် ကျောက်စ်… မုဗ် မုဗ်… ဟီ ဟိ
ငယ်ငယ်က ဝါးခယ်မသွားရင် …. သင်္ဘောနဲ့ကိုး … ဧရာဝတီသင်္ဘော(အစိုးရပိုင်) စီးရင်တော့ အစားအစုံ မစားရဘူး .. ကြားသင်္ဘော(ပုဂ္ဂလိကပိုင်) ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကထွက်ကတည်းက ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ ကြာဇံသုပ် ၂ပွဲအုပ်ပီးသား ပြီးရင် အိမ်သာပြေးဘီ ;) …..
တွံတေးကြော်လို့ မြစ်လေးခွဆုံရောက်ရင် ထမင်းလှေ ဆီထမင်းလှေ တွေ ကပ်လာပီ … ထမင်းပူပူကို ငှက်ပျောဖက်နဲ့ထုပ်လို့ ကြက်သား၊ ဝက်သား၊ ပုစွန် စတဲ့ဟင်းတွေကို ဆီပါးပါးပြန်ထားတဲ့ ခပ်စပ်စပ် ကရင်ချက်ဟင်းတွေနဲ့ ဗူးသီးဟင်းခါး တချို့ကျလည်း ချဉ်ပေါင်ဟင်းပေါ့ စားရတဲ့ အရသာ ဒီနေ့အထိ မမေ့နိူင်
ညလည်စာ ဆီထမင်းထုပ်ကို စာလေးကြော်နဲ့ သိမ်းပီးသကာလ … မအူပင်ရောက်ရင် သရက်သီးချဉ်ငံစပ် စားရကောင်းမလား? ငှက်ပျော်ကြော်ပဲ စားရကောင်းမလား? အဖွားကို မေးရတာအမော … ကျောင်းပိတ်လို့ ဝါခယ်မပြန်တိုင်း အဖေပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးက သင်္ဘောပေါ်မှာတင် တဝက်ကုန်တယ်
ခုများတော့ ရုပ်ဝတ္ထုတို့ဆီ လိုက်ရင်းပြေးရင် ဒေသ၊ သဘာဝရဲ့ အရသာတွေကို မခံစားနိူင်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တွေ ကျော်ပီလေ …..
စကားမဆီမဆိုင် တခါသား သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက် ဝါးခယ်မပြန်ရင်း … သင်္ဘောပေါ်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ မအူပင်သူ လသာမှာနေတဲ့ လွင်မာထွေးဆိုတဲ့ တရုတ်ကပြားမလေးကို သတိရသား အဟေး အဟေး
ဟုတ်တယ်ဗျ… တွံတေးတူးမြောင်းအဝမှာ လှေကလေးတွေနဲ့…
အခု သင်္ဘောခေတ်မဟုတ်တော့ သူတို့ ဘာလုပ်စားကြတယ်မသိ…